ZTE Axon 7 na ulo oru zuru ụwa ọnụ, nke mbụ na Europe | Gam akporosis
Na ZTE nubia Z11 e gosipụtara ụnyaahụ dị ka ekwentị nke edobere dị ka njedebe dị elu maka ndị nrụpụta China a. A smartphone nke na-abịa na profaịlụ ya kachasị elu ruo nke 6GB nke Ram na nke ahụ na nke a ọ na-etinye onwe ya n'otu ọnọdụ dịka OnePlus 3. A ZTE nke na-aga n'ihu ịkụ nzọ na ọnụ ọhụụ ọhụrụ nke ọ na-anwa ịmezi ọnụahịa ahụ dịka o nwere ike, ọ bụ ezie na n'ikpeazụ nke a anaghị eme oge ọ bụla.
Nke a bụ mgbe ZTE si Axon 7 na-abịa Europe, na-eme ya mpaghara mbụ na mpụga China ebe onu ogugu di. Ngwaọrụ ahụ, nke ewepụtara na mbido Mee nke afọ a, dị ugbu a maka ịnye iwu na Amazon maka France, Germany, Italy, Spain na United Kingdom.
Jacky Zhang, onye isi oche nke EMEA na APAC, na-ezo aka na mmalite ụwa n'ụzọ a:
“ZTE nwere obi uto banyere ememme izizi nke AXON 7 na Europe, na taa akara nkesa zuru ụwa ọnụ nke kachasị ọhụrụ na ama ama. Site na AXON 7 ọ bụ ihe a na-apụghị imeri emeri na nchikota nke imepụta nke na-adọrọ uche ndị ahịa, nkọwa dị elu yana ọnụahịa dị oke ọnụ, yabụ anyị nwere obi ụtọ maka ọchịchọ maka AXON 7 na Europe.
The ZTE Azon 7 bụ smartphone na gam akporo 6.0 Marshmallow, 5,5 ″ QHD ihuenyo, 20 MP n'azụ igwefoto, 8MP n'ihu igwefoto, Snapdragon 820 quad-core chip clocked na 2.15 GHz, 4 GB nke RAM, 64 GB n'ime ebe nchekwa (ịgbasa na 128GB) na onye na-agụ mkpịsị aka.
Pricegwọ ya ruru 449,99 XNUMX niile na Europe pekarịrị na UK nke dị na 359 pound sterling. Nnweta ya bụ maka July 30 ma ọ ga-adị na nnukwu ụlọ ahịa dịka Media Markt na Phone House maka ọnwa ole na ole sochirinụ dịka ZTE n'onwe ya kwuru.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Mgbasa ozi ZTE Axon 7 zuru ụwa ọnụ na-amalite iru Europe na mbụ
Diego Dominguez Ymodaba dijo
Achọghị m ka zte ma ọ bụ nyefee m, ihe kacha njọ m nwere ụbọchị.
Zaghachi Diego Domiguez Ymodaba
Àgwà kacha mma nke 4 kacha mma ederede na-ewere ngwa